Nerima nyika paIpad ine beta nguva | IPhone nhau
Imba yerima paPadad ine beta nguva
La kugadzirisa mifananidzo rave rakajairika sekutumira mameseji. Pamwe pane iyo iPhone kana paIpad, isu tine akawanda mafomu ekushandisa ekusiyana-siyana kuomarara anotibvumidza isu kugadzirisa edu akanakisa mifananidzo kuti uvandudze iwo Iyo hombe nhamba yezvibodzwa inotibvumidza isu kusarudza izvo zvinoenderana zvatinoda.
Rima Photo editing application iyo kusvika zvino yaingowanikwa pane iyo iPhone mahara. Nekudaro, ivo vavaki, Bergen Co, vafunga kuunza Anwendung kuna iPad nekuuya kweiyo nyowani iPad Pro.Kumhara kwechishandiso kune hombe skrini inotanga ne beta nguva vhura.
Iyo iPad inogashira iyo Darkroom app ine beta nguva
Dzivisa kushandisa akawanda mafomu panguva imwe chete uye uwane yakakwana kwazvo uye yepamusoro dhizaini yekushandisa yeIOS. Isu tinoisa fungidziro padivi uye tinotarisa pane izvo vafotori vanofarira.
Imba yerima application yakapusa uye yazvino pamwe neinobatsira uye inoonekwa. Mhedzisiro yatinogona kuwana inochinjiswa kune iko kushandiswa kweaya maitiro kunopa. Uyezve, yakasununguka zvachose. Nekudaro, dzimwe nguva chidzitiro che iPhone chidiki kwazvo kuti vagadzirise mafoto. Ndokusaka mushambadzi afunga kuunza iyo application kune hombe skrini: kune iyo iPad
Nekusvika kweiyo nyowani iPad Pro, Darkroom yatora a nguva yekuedzwa kuitira kuti avo vanonyanya kuda kuve neichi chishandiso pane yavo iPad vanozviita isati yatanga zviri pamutemo. Nekudaro, zvingave zvisina basa kana tikakudzidzisa kutevedzera beta nekuti huwandu hwese hwakatove hwazadzwa yevashandisi kuyedza iko kunyorera.
Zvinotarisirwa kuti mumazuva anouya nzvimbo nyowani dzichawedzerwa mu beta, saka tinokurudzira kuti iwe uise TestFlight pane yako iPad uye uende ku dandemutande Mutariri wemuDima kuti agamuchire kukokwa. Pane rimwe divi, mukati memavhiki mashoma tichakwanisa kuverenga kuRima mukamuri reApp Store zviri pamutemo.
Imba yerima: Mufananidzo / Vhidhiyo Mupepetivakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Imba yerima paPadad ine beta nguva
Maitiro ekugonesa kana kudzima kudzidziswa kuona muWatchOS 5